Ukubhula koNyaka omtsha woMtsha kunye nemiqondiso evela kumlumbi ozuzelayo ukuze ulonwabo, ubutyebi nomtshato
Iiholide zeNtsha entsha zixesha lemimangaliso kunye nethuba lokukwazi ikusasa lakho. Le mihla unokufumana iimpendulo zinyani kwiimbuzo malunga nothando, intsapho, iimali kunye nempilo. Iimpawu ezibonakalisiweyo zifihliweyo nakwizinto ezincinci.
Imiqondiso kunye namasiko omnyaka omtsha
Kwitheyibhile yonyaka omtsha kufuneka ibe yimveliso efanekisela ukuchuma (ukolweni, ipoppy, i-nut, u-honey, isinkwa).
Imilenze yetafile ifakwe kwiindophi (kukholelwa ukuba oku kuya kunceda ukugcina ubunye noxolo kwintsapho).
Ngokuhlwa, udoti akalahlwa, kodwa izihlangu ezigubukileyo ziphonswa ngaphandle komda.
Kumntu ophuka ngokungekho izitya okanye imihlobiso yeKrisimesi, uya kuba nethamsanqa ngenyanga yokuqala yonyaka omtsha.
NgoJanuwari 1, musa ukuhlambulula, ukwenzela ukuba ungaboni ubunzima unyaka wonke.
Akuvunyelwanga nje ukubeka iingubo ezintsha, kodwa ukufaka iipokethi ibhajethi enkulu yemali.
Ngemfazwe yokuqala ye-chimes kwiglasi ye-champagne ukuphosa imali kunye nokwenza uphumelelo lwezemali. Xa isiselo sidakwa, imali leyo isuswe kwisikhwama njenge-talisman yemali kunyaka wonke.
Disemba 31 noJanuwari 1 abakwazi ukuboleka imali.
I-bad omen - ukudlala ukugembula kwitheyibhi yokuzonwabisa.
Ngubani ophonsa umthi weKrismesi ephuma efestile, obhubhisa intsapho yakhe. Umthi uthathwa esitalatweni kwaye unamathele kwi-snowdrift.
NgoDisemba 31, awukwazi ukuqala ukuhlamba - oku kuya kubangela ukugula kwelinye lamalungu entsapho.
Kukholelwa ukuba ngobusuku bukaDisemba 31, amaphupha aprofeto. Zama ukukhumbula oko ubonayo, kwaye bhetele ubhale phantsi kwincwadi. Kwaye u-Eva wonyaka omtsha lixesha elifanelekileyo lokubuza imibuzo enomdla. Ezinye iindlela zokubikezela azizange zitshintshwe ngeenkulungwane kwaye zisifinyelele kwifomu echanileyo. Bazibuza bodwa okanye iqela elincinci labantu abafana. Akuvunyelwe ukuba udakwe. Ukukhanya kombane kunqweneleka ukucima, kwaye esikhundleni sayo ukukhanyisa amakhandlela.
Indlela yenombolo 1: Kwi-wax
I-Wax yinkampani yemvelo kwaye inamandla kakhulu, ngaphandle kweendlela ezininzi zokubhula ezingenakuphetshwa. Esinye sezivumo ezindala kunye nenyaniso zidibaniswa nokuthululwa kwamanani. Kwisitya esingqongileyo esinamanzi ashushu ahlambulukileyo, galela i-wax enyulu (ngokwaneleyo 50-70 g yezinto eziqinileyo). Ngexesha elifanayo, kufuneka ugxininise kwimbandela yemdla. Isibalo esibambileyo sihlolwe, sizama ukwenza uphawu kulo, oluya kuba yimpendulo. Iinguqulelo ezimbalwa zomzekelo:
Iifutshane - utshintsho olumnandi kwixesha elizayo elisondeleyo;
inkwenkwezi kukuzaliseka komnqweno onqwenelayo;
umyinge - umtshato;
umnqamlezo-uvavanyo olunzima, isifo;
ifoloko - ubuxoki, ukungcatsha;
intlanzi - ukuzinza, iimeko ezifanelekileyo.
Umlinganiselo we-wax, owawubaluleke kakhulu, wagcinwa de kube ngumnyaka ozayo. Ukuba umfanekiso ufukisele ingxaki, umzobo wangcwatywa emhlabathini.
Indlela # 2: Emanzini
Ookhokho bethu baqikelele kumanzi abalulekileyo "aphilayo". Kodwa kwiimeko ezisemadolophini kusele ukusetyenziswa okuphuma ngaphantsi kompompo (ubilisiwe kwaye ucocekileyo awuhambisani). Ngobusuku bukaDisemba 31, uthele amanzi ngamanzi kwisitya kwaye uyithabathele kwisitalato (ngaphandle kwewindow, kwi-balcony). Ngomso kusasa bathabatha isikhephe kwaye babuke ubuso obushushu:
elula kwaye elula - unyaka kulindeleke ukuba luzolile;
enye inzuzo enkulu kunye nenzuzo;
enye inkulu enkulu yokungena kunye nobunzima;
ezininzi i-hillocks - unyaka wokuphikisana, iziganeko ezilungileyo ziya kuhamba kunye nezimbi.
Indlela yenombolo 3: Esibukweni
Ngokungafani nokuxoxwa kwintlalo engcwele, le ndlela ayikhoyiki kwaye iphephile. Ukuze ufumane ukuba unyaka ozayo uza kudlula, ngokuhlwa ngokuhlwa ngoDisemba 31, isibuko sithathwa kuqhwala kwaye sibekwe ngokuzenzekelayo. Emva koko kuthululwa phezu kwamanzi kwaye washiya ngoko ubusuku bonke. Ngomso kusasa bajonga iipatheni:
Iindlovu ezijikelezayo zithetha ukuba unyaka uya kulungeleka;
izikwere zibonisa ubunzima;
ii-triangles ziqikelela ukuphumelela othandweni.
Indlela yenombolo 4: Ukutshata
Ukuqagela ngokulula kuya kunceda ukwazi ukuba intombazana ifanelekile ukutshata umnyaka ozayo. Kuya kuthatha iikomityi ezintathu. Ngaphantsi kwembini yazo kufuneka ubeke i-rikbon ribbon kunye neendandatho, okwesithathu ukushiya kungenanto. Emva koko izitya zivuselela kwaye zikhethe enye yazo. Ukuba kwakukho iteksi apho, intombazana iya kuba ngumtshakazi (fumana i-offer), isondo siya kutshata. Inkompo engenanto ibonisa ubomi obunobomi.
Indlela yenombolo 5: Eqanda
Enye indlela enomdla enxulumene nokuqatshelwa kwee-silhouettes. Kwiglasi engabonakaliyo ngaphandle kwemidwebo ethululela amanzi atshisayo kwaye ngokukhawuleza uthele enye efanayo. Oku kulungeleke kakhulu, ukugqithisa igobolondo ukuze i-yolk ihlale ngaphakathi. Ukufumana inceba, amaqanda ezinkukhu asekhaya asetyenziswa ngokuqhelekileyo, kodwa umgangatho wesitolo ufanelekile. Into yokuqala kufuneka uyibeke ingqalelo ukuba ingaba iphrotheni iwele phantsi kweglasi. Oku kuthathwa njengophawu olubi kakhulu, ukuqikelela ukugula okukhulu okanye ukulahleka okukhulu. Ukuba iprotheni ihlala phakathi, igalazi iqala ukujika ngokukhawuleza, ikhangele umzobo:
ukuzinza ikhaya, ukuhlala kakuhle;
entabeni - ukunyuka kwinqanaba lomsebenzi;
Inqanawa luhambo olude;
Intyatyambo yintando entsha;
Isitshe ngumsebenzi ongenanto.
Ukuvumeliswa koNyaka omtsha kumazwe ahlukeneyo
Ukuqikelela ukuba kusekupheleni koNyaka omtsha kwamkelwa kuphela eRashiya. Esi siko sisungulwe kumazwe ahlukeneyo kwaye sinemisebenzi yaso ekhethekileyo. Ezinye iindlela zokufumana ikusasa zingafundiswa ukuzonwabisa ngeendwendwe zakho:
E-Israel ngo-Eva omtsha, i-jug yewayini ifakwa efestile. Ukuba kusasa iziqulatho zomkhumbi ziyancipha - unyaka uya kuba yinzuzo, ukuba kungenjalo - inzuzo.
EGrisi, kuyinto yesiko ukuphuma esitrato ngoJanuwari 1 kunye nentsapho yonke, ukuze utyumle isebe elincinane lomthi kwaye ulwahlule ngokulinganayo. Kwiintsuku ezimbalwa kamva intsapho iqokelela kwakhona, kwaye wonke umntu uphonsa inxalenye yesebe kwindawo yokucima umlilo. Nabani na onamandla ngakumbi, eso sifiso siya kuzaliseka. AmaGrike amaninzi aqikelela nge-grenade. Ngo-Eva onguNyaka omtsha, isiqhamo sitshitshiswa kwivaranda okanye udonga lwendlu. Ukugqithiswa kweenqolowa, ukuphumelela konyaka kuya kuba.
EItali naseSpeyin, abantu basekhaya bafuna umnqweno we-clock clock. Kulowo nalowo uvalo kufuneka ufumane ixesha lokutya iidiliya (12 kuzo zonke). Lowo onokukwenza, uya kuzaliseka umnqweno.
EBulgaria, kuyisiko ukubhaka i-pie ekhethekileyo yoNyaka omtsha. Yongeza iincinci ezimbalwa kunye neengqekembe ezimbini. I-pie ekulungeleyo yenziwa ngexesha lomthendeleko wokugubha kunye neendwendwe. Lowo ufumene kwisiqwenga esinye intonga, ulindela inhlanhla enothando kunye nempilo enempilo, amabini amabini okanye amaninzi - impumelelo kunye nenhlanhla kwishishini, imali-inzuzo enkulu.
Isithethe esitsha seNtshintshi sonyaka sinxulumene nokupheka. Ukunyangwa kuthiwa "ikhukhi kunye nezibikezelo". Amanqaku amancinci afihliweyo kwimveliso nganye. Zonke iibheka zitshintshelwe kwiplani enkulu ukwenzela ukuba isivakashi ngasinye sikhethe ikhefu. Umyalezo ngaphakathi ungabandakanya isifiso, isiluleko, isicatshulwa esisodwa okanye ukuxela kwangaphambili.
Ukuqagela kwiindawo zekhofi - ukuchazwa kweempawu kunye nemidwebo
Fortune uxelela ngeKrisimesi: iindlela zokuxela, ukuqiqa
Ukuqagela nge-wax kunye namanzi ngekamva-intsingiselo nokuchazwa kwamanani, iileta kunye namanani
Ukuhlanjululwa yiKrisimesi kwisibuko - indlela yokuvumisa
Ukuxhamla kweNtsha kaNtsha ngonyaka weBlue Horse
Iibhonsi zokutya kwasekuseni kunye neqanda nokugxila
Isaladi yeetamatato eziluhlaza ebusika - zokupheka kunye nesithombe ngaphandle kobuncwane, kunye negalikhi, imifuno kunye nebhotela, e-Korean
Ubhontshisi obuhlaza obuhlaza
Ukuzilolonga ukuqinisa imizila yezandla
Umsila omnyama kunye ne-shrimps
Impilo yowesifazane ngexesha lokukhulelwa
UVladimir Friske wadana neentlanganiso zakhe nomzukulwana wakhe
Iipatato zincinci kunye nesalmon
Yintoni okufanele ibe yimenyu yokuzonwabisa ye-2017 Cock: iingcebiso kunye neendlela zokupheka okumnandi
I-pretzels ezenziweyo ngokuzaliswa
Iimpawu kumngcwabo: into engenako eyenziwa ukuba ingenise intsha entsha
Zumba: silahlekelwa iikhalori ezili-900 ngeyure phantsi komculo othungayo!
ULobio ukusuka kubhontshisi
U-Ksenia Borodina wanxusa uncedo kummeli kaBoris Berezovsky
Iinqwelo ze-cutlets ezivela kwi-veal nebhali
I-Poster ye-Valentine's Day: imbono yokudala iphephandaba lesodonga